> Resource > Ladnaansho > Siduu u Kingston SSD Data Recovery
Waxaan ka Kingston SSD soo kaban karto, Files?
Waxaan leeyahay ka 120GB Kingston SSDNow SSD. Waxaan leeyahay files badan oo muhiim u ah oo ku saabsan. Waxaan formatted kaliya ee lama filaan ah sababtoo ah waxaan doonayay in la isticmaalo waa sida nidaamka drive ah. Waxaas oo dhan files muhiim ah oo aan la la'yahay oo anigu ma aan yeelan gurmad ah. Run ahaantii waxaan u baahan tahay si ay u soo ceshano. Fadlan ii caawin!
SSD waa qalabka lagu kaydiyo ugu dhaqsiyaha badan oo ugu nabdoon taas oo ka caawisa in uu kaydiyo dhammaan noocyada kala duwan ee files. Kingston SSD waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan suuqa. Si kastaba ha ahaatee, files weli lagu lumin karaa ka Kingston SSD sababtoo ah tirtirka, formatting SSD, weerar virus iyo xataa qalliin aan habboonayn. Mid ka mid xaqiiqada ku saabsan files badiyay aad Kingston SSD waa in ay weli ku sugan tahay meel ka hor inta aan la overwritten by xog cusub. Marka soo food noocan oo kale ah arrinta, waxaa loo baahan yahay Kingston SSD xal kabashada xogta.
Waxaa jira barnaamijyo aad u weyn soo kabashada xogta lacagta Kingston SDD ee internetka. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac gabi ahaanba waa ugu fiican iyaga ka mid ah mid ka mid ah. Tani utility awood badan kabanayso xogta ka Kingston SSD hab aan caadi ahayn fudud oo ammaan ah. By aad ka baareyso Kingston SSD la, ayaad ugu soo ceshano karo oo dhan files lumay, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, waraaqaha, files audio iyo in ka badan.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah in ay dib u soo ceshano xogta ka Kingston SSD hadda.
Qabtaan Kingston SSD Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Waxaan idin tusin doonaa sida inuu ka soo kabsado xogta ka Kingston SSD la Wondershare Data Recovery for Windows. Users Mac aad kala socon kartaa hage la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada si ay u bilaabaan soo kabashada xogta Kingston SSD ah.
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad heli doontaa interface ah 3 hababka soo kabashada. Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha si taxadar leh oo ka mid ah in ay doortaan mid ka mid ah kuwa ugu haboon ee aad u.
Halkan, waxaan dooran kartaa "File lumay Recovery" mode sida isku day ah oo hore.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan Kingston SSD.
Tallaabada 2 baarista Kingston SSD
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan aad Kingston SSD oo guji "bilow" button in aynu barnaamijka waxa laga baarayo.
Haddii files aad Kingston SSD lumay, maxaa yeelay formatting, inaad si fiican u doortaan lahaa "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka Kingston SSD
Xogta laga helay aad Kingston SSD lagu soo bandhigi doonaa barnaamijka dib markii baar. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan faylasha aad rabto in ay dib u hanato oo ka dhacay on "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Ha badbaadiyo files soo kabsaday dib si aad u Kingston SSD isla markiiba ka dib.